Kooxda Leicester City ayaa garoonkeeda lagu guddoonsiiyay Koobka Horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyeereedka 2015/2016. – Cayaaraha dunida
Kooxda Leicester City ayaa garoonkeeda lagu guddoonsiiyay Koobka Horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyeereedka 2015/2016, kaasoo aan la fileyn inay ku guuleysaneyso, hase yeeshee muujisay karti, fir fircooni iyo kubada cagta waxay tahay.
10-bilood ka hor ayaysan dadka marna fileyn in maanta oo kale in Koobkii Horyaalka Ingiriiska ay ku guuleysaneyso Kooxda Leicester oo sanadkii hore bishan oo kale May ay si dirqi leh uga bad baaday inay dib ugu laabato heerka labaad.
Hase ahaatee Tababaraha reer Talyaani Claudio Ranieri ayaa kooxda u rumeeyay riyadooda aheyd in mar un ay ku guuleystaan Koobka Horyaalka Ingiriiska.
Kooxda Leicester City ayaa koobkan ku hor-qaaday kooxihii waa weynaa ee Ingiriiska sida Chelsea oo koobka difaacaneysay, Manchester United, Man City, Arsenal iyo Liverpool, kuwaasoo ahaa kooxaha ku guuleysanayay horyaalka 30-kii sano ee u dambeeyay.
Leicester City ayaa todobaadkii hore loo caleema saaray Horyaalnimada Ingiriiska, labo kulan ka hor, markii kooxda ku soo xigtay ee Tottenham ay bar bar dhac la gashay Chelsea, sidaas Leicester oo todobo dhibcood ku hogaamineysay ay iyadoo aan ciyaarin ku guuleysatay.
Ciyaarta caawa dhex martay Leicester iyo Everton ayaa aheyd midii la wada sugayay, maadaama Leicester kor hoos ay aheyd kooxda ku guuleysatay Horyaalka, isla markaana si gaar ah isha loogu hayay kulankan, maadaama garoonkeeda ku ciyaareysay, lana filayay in la guddoonsiinayo koobka.
Leicester City ayaa muujisay inay tahay koox awood leh, xitaa hadii Tottenham todobaadkii hore soo badin lahaayeen, waxay cadeysay inay Everton ay ka adkaan laheyd, isla markaana aheyd kooxda mar kasta koobka ku guuleysan laheyd.
Garoonka King Power Stadium ayaa waxaa soo buuxiyay taageerayaal fara badan oo ay ka muuqatay farxad iyo xamaasad, waxaana bilowgii hore ee ciyaarta ay Kooxda Leicester City ay heleen gool, kaasoo u dhaliyay weeraryahankooda Vardy oo labadii kulan ee u dambeeyay ganaax ku maqnaa.
Leicester ayaa hadana heshay gool labaad isla qeybta hore, waxaana u dhaliyay ciyaaryahan King, kaasoo sii xoojiyay farxada taageerayaasha, waxaana qeybtii hore lagu kala nastay 2-0.
Qeybta labaad ciyaaryahan Vardy ayaa gool saddexaad u dhaliyay kooxdiisa, kaasoo ahaa rigoore ama gool ku laad, waxaase uu iska khasaariyay rigoore labaad oo uu hawada ku talay, waxaana hadii uu dhalin lahaa uu la sinmi lahaa ciyaaryahan Kane oo ku hogaaminaya tartanka gool dhalinta 25-gool, balse wali kulan ayaa haray.
Everton ayaa waxaa gool u dhaliyay ciyaaryahan Mirales oo bedel ku soo galay, kaasoo ciyaarta ka dhigay 3-1.
Ugu dambeyn Leicester City ayaa la guddoonsiiyay koobkii iyo taajkii Horyaalnimada Ingiriiska ee xilli ciyaareedka 2015/2016, waxaana farxad iyo damaashaad is qabsaday garoonka, iyadoo ciyaartoyda lagu naaneyso dawacooyinka ay dabaal degayeen markii koobka gacanta loo geliyay.